Kuvandudzwa - Dhizaini magazini
Kapu Chikara Cook kapu, ibutiro ine akasiyana ezvisikwa uye yakagadzirirwa kuputa chikafu uye kugadzira akasiyana flavour uye scents. Vanhu vazhinji vanotenda kuti nzira chete yekugadzira chikafu chakapfungawa ndeyekupisa mhando dzakasiyana dzehuni asi chokwadi ndechekuti, unogona kuita kuti chikafu chako chisvinirwe nemidziyo yakawanda uye kugadzira kuravira nekunhuhwirira kwakazara. Vagadziri vacho vakaziva mutsauko wekuravira wakakomberedza nyika uye ndosaka dhizaini iyi ichinyatsochinjika kana zvasvika kune nyaya yekushandisa matunhu munzvimbo dzakasiyana. Aya makapu anouya mune zvakasanganiswa uye imwechete zvisanganiswa.
Curling Simbi Iyo nano airy curling iron inoshandisa inovandudza yakaipa ion tekinoroji. Inoramba yakatsiga mameseji, yakapfava kupenya curl kwenguva yakareba.Forling pombi yakaitwa neano-ceramic coating, inonzwa yakanyorova. Iyo inodzika vhudzi zvinyoro uye nekukurumidza nemhepo inodziya yeiyo ion isina kunaka. Kuenzaniswa neakakora maaroni pasina mweya, iwe unogona kupedzisa mune rakapfava bvudzi mhando.Iyemukati ruvara rwechigadzirwa rakapfava, rinodziya uye rakachena matte chena, uye ruvengo rwemavara ndeye pink goridhe.
Bvudzi Straightener Iyo Nano airy yakatwasuka simbi inosanganisa nano-ceramic coating zvinhu neyekuvandudza yakaipa simbi tekinoroji, iyo inounza bvudzi zvinyoro uye rakapetwa muchimiro chakatwasuka nekukurumidza. Nekuda kweiyo sensor yemagineti iri kumusoro kwe cap uye muviri, chishandiso chinodzima pakarepo kana cap yacho yakavharwa, iyo iri safe kutakura kutenderera. Muviri wakaomeswa ne USB rechargeable wireless dhizaini zviri nyore kuchengeta muhombodo uye kutakura, kubatsira vakadzi kuchengetedza yakanakisa bvudzi chero nguva, chero kupi. Iyo chena-uye-ruvara rwemavara scheme inokwereta iyo mudziyo hunhu hwechikadzi.
Bhokisi Remasikati Iyi indasitiri yekuchera iri kubudirira, uye kutora kwave kuri chinhu chinodiwa kuvanhu vemazuvano. Panguva imwecheteyo, marara akawanda zvakare akagadzirwa. Mazhinji emabhokisi ekudya anoshandiswa kubata chikafu anogona kusevenzerwa, asi mabhegi epurasitiki anoshandiswa kurongedza mabhokisi ezvekudya zvechokwadi haagadzirisike. Kuti kuderedze kushandiswa kwemabhegi epurasitiki, mabasa ebhokisi reupfu uye mapurasitiki akabatanidzwa kugadzira mabhokisi matsva emasikati. Bhokisi re bale rinoshandura chikamu chega muchigadziko chiri nyore kutakura, uye chinogona kubatanidza mabhokisi mazhinji ekudya, zvichideredza zvakanyanya kushandiswa kwemabhegi epurasitiki ekutakura mabhokisi ezvikafu.
Chikafu Chinwiwa Kapu Curling Simbi Bvudzi Straightener Bhokisi Remasikati